Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland oo hay'adda UNODC kala wareegtay dhisme ay ku shaqeyso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland oo hay’adda UNODC kala wareegtay dhisme ay ku shaqeyso[Sawirro]
BOOSAASO – Waxaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso xaflad kooban oo daahfur u ahayd dhisme ay dhistay hay’adda UNODC kaasoo ay ku shaqeynayso Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadka Badda Puntland.
Waxaa kasoo qeybgalay Agaasimaha Guud ee W/Dekedaha,Gaadiidka Badda Puntland Cabdimajiid Samatar Jaafaan,Taliyaha ciidanka Dekeda Maxamed Cali Xaashi,saraakiil ka socotay hay’adda UNODC iyo Al-Bashid Construction.
Sarath Chandra Surasena oo ah sarkaal ka socotay hay’adda UNODC ayaa sheegay iney ku wareejinayaan Wasaaradda Dekedaha,Gaadiidka Badda Puntland dhismahan oo loogu talagalay iney ku shaqeyso.
Waxa uu sheegay iney ka caawiyeen dhanka tababarada,sida makaanikada,laba doonyood oo loo soo wado iyo laba gaari,matoorada badda.
Sarkaalkan ayaa xusay in sheegay in ka hay’ad ahaan ka gacan siin doonaan Wasaaradda Dekedaha iyo ciidanka Dekeda sidii amniga badda Puntland loo sugi lahaa,wuxuuna ballan qaaday iney si dhow mar kasta ula shaqeyn doonaan.
Sarath Chandra Surasena
Hay’adda UNODC ayaa ah hay’adda Puntland ka taageerta dhanka xabsiyada,waxayna si dhow ula shaqeysaa Wasaaradda Caddaaladda iyo weliba Maxkamadaha.
Taliyaha Dekeda Bosaso Maxamed Cali Xaashi
Taliyaha Ciidanka Dekeda Boosaaso Maxamed Cali Xaashi ayaa isna dhankiisa ka hadlay madasha,wuxuuna sheegay iney ku faraxsan yihiin garab istaaga hay’adda UNODC,wuxuuna ballan qaaday iney ka shaqeyn doonaan sidii loo ilaalin lahaa Badda Puntland.
Aggaasimaha Guud ee Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Cabdimajiid Samatar Jaafaan oo ugu dambeyn la wareegay waraaqaha dhismahan ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin shaqada ay qabatay Hay’adda UNODC.
Wuxuu u mahadceliyey hay’adda UNODC iyo UNOPS iyo madaxdeeda sida ay mar walba u garab taagan tahay Wasaaradda iyo ciidanka Dekeda.
Waxaa dhismahan laga shaqeynayey hirgelintiisa iyo dhameystirkiisa ugu yaraan shan sano,waan ku faraxsanahay in maanta aan joogno munaasabadii u dambeysay”ayuu yiri Jaafaan.
Ugu dambeyn waxaa lala kala wareegay waraaqaha dhismahan cusub.